Xiddig ka tirsan Real Madrid oo si cad u sheegay inuusan hubin mustaqbalkiisa Santiago Bernabeu – Gool FM
Dajiye February 19, 2020
(Madrid) 19 Feb 2020. Xiddig ay milkiyadiisu leedahay kooxda Real Madrid ayaa si cad u sheegay inuusan hubin mustaqbalkiisa garoonka Santiago Bernabeu, inkastoo oo uu haatan amaah ugu ciyaaro kooxda Brussia Dortmund ee horyaalka Germany.
Iyadoo heshiiska amaahda ah ee Dortmund ku qaadatay Achraf Hakimi uu ku eg yahay dhamaadka xilli ciyaaredkan, ayuu daafaca Muslimka ah sheegay in uu doonayo in uu ku kore islmarkaana qaab ciyaaredkiisa fiican uu ku sii wado BVB.
Achraf ayaa ku soo bilaabanayay kulan kasta oo horyaalka Bundesliga ah tan iyo markii uu ka mid noqday Dortmund, oo laba xilli ciyaareed oo amaah ah heshiis dhan uu kaga mid noqday sanadii 2018.
21 sano jirkan ayaa wax qabad fiican muujiyay intii ay socotay lugta koowaad ee wareega 16-ka tartanka UEFA Champions Leagea sanad ciyaaaredkan, kaddib markii ay 2-1 kaga adkaadeen PSG.
Achraf ayaa ku dhow in marka uu dhamaado xilli ciyaaredkan uu dib ugu soo laabto Madrid, laakiin ciyaaryahankan caalamiga ah ee qaranka Morocco ayaa sheegay in wax walba ay macquul yihiin kaas oo uu ku hormarinaayo wax qabadkiisa.
Si kastaba ha noqonee, Hakimi ayaa xilli ciyaared fiican ku qaadanaya horyaalka Germany iyadoo kooxdiisa ay rajo ka qabto in ay ku guuleystaso horyaalka iyo tartanka UEFA Champions League.
"Wuu qarwaayay" – Ruud Gullit oo cagta mariyay Virgil van Dijk